naoty 4.80 avy tany 5 mifototra amin'ny 20 mpanjifa naoty
Ny vadiko dia mpikirakira fantson-drano ary tsy mifidy izay faucet ananantsika ao an-trano. Ity dia ho an'ny RV hipetrahantsika mandritra ny herintaona eo am-pananganana ny tranonay vaovao, noho izany dia tsy te handoa ny $ 200 + ho an'ny fantsona mainty tsara tarehy izahay ao amin'ny fivarotana fanatsarana trano eo an-toerana. Fantatro fa afaka mamerina azy aho raha mankahala azy isika ary tsy fako izany, dia nanararaotra kisendrasendra aho ary nividy izany tsy ho fampitandreman'ny vadiko momba ny «faucets mora vidy» ary samy tianay izany! Ny habe sy ny refy dia mety amin'ny RV ary tianay ny fahatsapana adidy mavesatra amin'ny lanjany mitazona ny sprayer. Napetraky ny vadiko tsy nisy olana ary gaga izahay roa noho ny kalitaon'ny famafazana, ny bokotra fanodinana io dia miova avy amin'ny tsifotra mankany amin'ny stream ary misy bokotra mijanona eo amin'ny lohan'ny spray (tena mety), ny tahony izay mamelona azy ary mamarana mainty miasa matte. Tiavo fotsiny io ary sanda lehibe !! Manoro hevitra!
C *** ny2020 / 10 / 10
Nodidiako ity hisolo ny faucet amin'ny vozona tafaporitsaka ao amin'ny efitranonay. Izahay dia te hanana iray izay misy paosy mihosotra nefa tsy te handany ny $ 100 mahery ho an'ny iray izay tadiavinay any amin'ireo magazay lehibe. Nahita an'ity ity ary nanapa-kevitra ny hanandrana.
Tena mora ny nametraka. Ny mpampifandray rehetra dia nampidirina afa-tsy nila nila iray hafa aho noho ny valves on / off izay ananako. Ny zavatra hafa rehetra dia nomena ary tena mora apetraka. Nisy toromarika teo amin'ilay marika. Novakiako fa ny hafa manana olana amin'ny fihemorana amin'ny hafanana / hatsiaka amin'ny mahazatra. Ampifandraiso fotsiny ny tsipika rano mafana / mangatsiaka mifanohitra aminao ary aza raharahianao ny fanoratana eo amin'ny on / off control satria tsy hitanao izany raha tsy jerenao avy eo amin'ny sisiny na ahoana na ahoana. Avy eo ianao dia hanana fifehezana toy ny mahazatra.
Lehibe ny renirano ary misy heriny ihany. Tiavo ny famafazana ary esory ny baomba mba hahafahan'ny lapoaly lehibe sy vilany lasopy lehibe hosasana sy hosasana mora foana. Tsara ho an'ny fanasan-damba amin'ny fantson-drano lehibe sy lalina. Amin'ny ankapobeny dia tena faly aho tamin'ity faucet ity. Ny fiantohana 5 taona dia tsara ihany koa. Hanoro hevitra an'ity vokatra ity amin'ny olona fantatro aho. Vokatra tsara.
C *** ny2020 / 10 / 11
Nividy ny fanavaozana ny lakozia izahay ary te hivoaka amin'ny endrika mangalatra tsy hita ary ny fonenanay dia antsipirian'ny espresso mainty taolana. Ka izany dia fiasa tsara be ho an'ny lakozianay. Mora ny fametrahana, ny vadiko nametraka tao anatin'ny 45 minitra. Angamba mety tsy naka fotoana firy firy fa ilay fantsona taloha sy faucet anay izay misy fanaintainana hivoahana. Manana hery mahafinaritra izy io rehefa. Mitifitra rano ary ny knob dia mora ovaina amin'ny rano mafana sy mangatsiaka maniry fotsiny ny ho lehibe kokoa. Miverina mora foana ihany koa ny misintona. tsy mila atosika hamerina azy io amin'ny tanana. Toa tsara ny farany, tsy mora vidy. Araho hatrany ny sary nohavaozina rehefa vita ny lakozia.
Tiako ny fitiavana tia ity faucet ity! Mora be ny nametraka azy, 5 minitra fotsiny no nanesorako ilay faucet taloha. Ny ampahany sarotra indrindra apetraka dia ny fanesorana ilay teo aloha. Mazava ny lalana, tiako fa misy ohatra amin'ny dingana tsirairay. Nohavaozina avy hatrany ny lakozia ary tena faly aho amin'ity fividianana ity! Tena mora vidy, toa kalitao, tiako ny farany matte. Tandremo, ny dian-tanana dia hita kokoa nefa voafafa mora foana. Tonga amina fonosana tsara sy taloha kokoa noho ny nandrasana izany. Tsy misy zavatra ratsy holazaina momba an'ity vokatra ity, efa nanolotra roa hafa aho ary samy nividy azy. Te handefa sary aho saingy toa tsy mahazo manao famerenana intsony. Ratsy loatra satria tsara be ilay izy!
Amin'ny maha-vehivavy mpitovo anao, mora toy ny taloha ihany io. Tsy ilaina ny fitaovana afa-tsy ny wrench ary izany dia ny manenjana ny bolt ho an'ny tsipika rano.
Farany nanova ny faucet ao an-dakozianay. Efa nitady fotoana elaela ary nahita an'io hatsaran-tarehy io. Ny vidiny ambany dia nahatonga ahy hisalasala fa ny tsikera dia nanamafy ny fanapaha-kevitro hividy. Ary ny hevitra dia marina. Ny faucet dia fiovana tsara ho an'ny lakozianay ary feno endrika mahafinaritra. Tiavo ny famafazana tsipika sy ny fahaizana miova amin'ny famafazana. Mora ny fametrahana ary tsy nanana olana izahay. Tena mila olona roa hanala faucet taloha ary hametraka vaovao. Manamora ny fametrahana. Tonga tsara anaty boaty ny faucet ary tafiditra ao daholo ny faritra. Fividianana mahatahotra izany! Tsy mety mandeha amin'ny fiantohana 5 taona. Jereo ny sary, alohan'ny sy aoriany. Fahasamihafana tsara toy izany !!!!
Izaho dia teny an-tsena hividy faucet vaovao rehefa nanomboka nitete teo am-pototra ny ahy. Nitsidika ny Lowes sy ny Home Depot aho ary hita fa fandaniam-potoana. Nofantariko hoe inona ny vidiko ary ireo ao anatin'io faritra io dia toa sy nahatsapa ho toy ny fantsom-bolo vita amin'ny kofehy nopetahany takelaka, mitovy amin'ny nosoloiko. Malina aho tamin'ny famerenana kintana 5 rehetra tany Amazon, na izany aza dia nanapa-kevitra ny hisintona ilay tarika mifototra amin'ny fahatsapana fa tsikera marina aho. Soa ihany, rehefa nozahana ilay faucet, dia fantatro fa nanao ny safidy tsara aho.
Amin'ny fomba mahomby, manana ny zavatra rehetra notadiaviko tao anaty faucet fanoloana izy. Tsy azoko antoka hoe hoatran'ny inona loko mainty izy io, saingy faly aho milaza, toa tsara eo amin'ny fitoerako volafotsy io. Ny faucet sy ny kojakoja rehetra miaraka aminy dia manana fahatsapana kalitao. Tsy plumber aho, nefa tsy nanana olana tamin'ny fametrahana an'ity faucet ity irery aho. Tena faly amin'ny fividianako ary tena hanome an-tanana an'iza ho an'iza.
Napetrako tao anaty 2 herinandro teo ho eo ity faucet ity, ary hatreto tsy misy olana ary efa mandeha tsara io. Toa tsara ihany koa. Tena mora ny fametrahana. Mikoriana tsara lavitra noho ny Delta taloha nosoloiny. Toa kalitao tsara. Izy io dia manana fihodinana mivantana eo amin'ny lohan'ny famafazana izay ahafahanao manidy mora foana ilay tsifotra. Tonga soa amina fonosana matevina mba hisorohana ny fahasimban'ny fandefasana. Ampirisihina mafy.
Kalitao tsara, famaranana tsara tarehy, mora apetraka… eritreritra sy injeniera marobe no tafiditra tamin'ity zazakely ity. Mamporisika mafy! Fomba fijery maoderina tena milay. Ho an'izay rehetra miaina ny fantsom-panafanana mikapoka ny fantsom-pandrefesana ao ambanin'ilay fantsom-baravarana rehefa misintona mpitifitra ianao… mahazoa ravin-taratasy mivaingana… Nampiasa placemat karazana plastika aho ..fehezo moramora ilay fantsom-pitrandrahana hosoka ary akombaho ​​toy ny kônà endrika, nampiasa pohy lavaka avy amin'ny fitaovam-pianarana taloha an'ny zanako lahy aho ary nanao lavaka roa manodidina ny iray santimetatra .. nofonosana fehy ary nofonosina ilay matre… nasiako lavaka roa teo amin'ny kônina mba hahafahako mifikitra amin'ilay tatatra fantsona sy whalaa, ny lanja mihetsiketsika fotsiny etsy sy eroa ao anaty fonon-tanana / cone ... tsy mamely intsony ny lanjan'ny fantsom-pako… miasa tsara… vahaolana mahomby ho an'io olana io. Mahagaga indray ity faucet ity… .tsy ho diso fanantenana ianao.
Nividy ity faucet ity ho toy ny faucet vonjimaika aho rehefa vaky ilay taloha, nanantena ny hisolo azy rehefa manomboka ny fanamboarana ny lakozia amin'ny fararano isika. Faly be aho amin'izany ary hijanona izany! Nametraka azy mora foana ny vadiko ary toa lafo izany. Ny rafitra misintona ny spray azo esorina dia mila tsy voasakana ao ambanin'ny filentehanao raha tsy izany dia hanana olana ianao amin'ny famerenany azy hiverina amin'ny toerany. Raha azonao antoka fa mazava ny mihetsika dia tsy misy olana ary mandeha tsara izy io. Ny zanako lahy dia manao fanavaozana ary tena tiany ny anay ka novidiko ho azy ny iray tamin'ireny. Hanana iray hafa ihany koa aho rehefa manamboatra ny fanavaozana ny fantsom-barantsika, satria tsy hosoloina ity iray ity! Tiako!
Nividy an'io aho rehefa avy nijery ireo magazay Box lehibe ho an'ny fantsona ary nahatsapa fa tsy te-handoa vola be dia be ho an'ny fantsona iray. Gaga be aho fa nahita ny kalitaon'ity entana ity rehefa tonga. Tao anaty fonosana mitovy amin'ny faucets marika be izy io. Izy io dia mafy orina, vita tsara. Tena tiako ny bika aman'endriny ary mora ampiasaina izy io. Izy io dia manana fiasa mahafinaritra vitsivitsy; ny bokotra on sy mivoaka ho an'ny safotra sy safidy karazana spray. Hanoro hevitra an'izay mitady hisolo faucet mitady ny fahatsapana sy kalitao avo lenta aho izao. Haingana sy mora be ny fametrahana.
s *** ny2020 / 11 / 18
Manomboka mamerina trano vaovao alohan'ny hifindrana ary iray amin'ireo asa voalohany dia ny kaontera misy ny fitaovana fitrohana lakozia vaovao. Ireo fivarotana boaty lehibe dia nampatahotra ahy tamin'ny vidiny lafo indrindra. Nanomboka nijery ny diako tany amin'ny fivarotana boaty lehibe aho - amazona ary nahita fifantina lafo kokoa. Ity faucet ity dia mahatsapa tena voaorina tsara. Ny vita matte dia tsara ary tsy mampiseho dian-tanan-tànana. Mavesatra izy io ary noho izany dia mahatsapa ho matanjaka sy matanjaka. Ny fonosana plastika tokana ao aminy dia ny fonon'ny bara any amin'ny faran'ny fantsona. Tonga miaraka amin'ny torolàlana sy ny fitaovana ilaina rehetra. Hanavao miaraka amin'ny sary iray indray mandeha rehefa apetraka ireo tampon-kaontera.
Mahafinaritra ity vokatra ity! Napetrako tao an-dakozianay ny faran'ny herinandro lasa teo - ny faucet taloha izay efa am-polony taona lasa izay no nila soloina ratsy. Ny ankamaroan'ny lakozianay dia nohavaozina tamin'ny ankapobeny, ankoatry ny fitoeran-drano. Tekinika kely izy io noho ny toerana nilentiko nanandrana nametaka ny zava-drehetra, fa ny zavatra rehetra niraikitra mora foana tamin'ny paompy ary mandeha araka ny tokony ho izy. Tiako ny fahaizana mifamadika mora eo anelanelan'ny rano mikoriana sy ny sprayer - tsy misy fantsona misaraka intsony ho an'ny sprayer! Ny faucet dia toa tsara ao an-dakozianay - manana latabatra mainty misy tampony mainty izahay. Mifanaraka tsara!
*** D D2020 / 11 / 29
Ity faucet ity hatreto dia mendrika ny vidiny. Sarotra ny mahita fantsona mainty matte izay tsy dia lafo loatra. Mora ny nametraka. Nifanena tamina olana tamin'ilay sombin-tsolika ao ambaniny aho satria tsy nifanaraka ireo kofehy fa tsara ny tolotra mpanjifa ary nandefa iray vaovao ho ahy. Nahafinaritra azy ireo ny niara-niasa. Matoky aho fa hanohy hanampy izy ireo raha misy tsy mety.
Ny hany tadiaviko amin'ity faucet ity dia rehefa miditra amin'ny maody famafazana ianao ary mamono ny rano dia tsy miverina amin'ny maody mahazatra intsony izy io. Tsy mbola faran'izao tontolo izao satria efa zatra namerina azy io fotsiny aho vao namono ny rano fa mety hahasosotra ny sasany izany.
Tena azafady amin'ity fividianana faucet ao an-dakozia ity. Vao avy namboarina ny lakozia, ary ity faucet ity dia mety tsara ho an'ny lakozia maoderina. Toa tsara sy tsara ilay izy, miasa tanteraka, ary tiako ilay endri-javatra misintona. Faucet tsy manam-paharoa ho matte mainty loko, miaraka amin'ny fantsom-panafotra azo esorina. Nampiaiky volana azy ny kalitao sy ny asany. Tonga miaraka amin'ny fanarahana torolàlana mora foana izy io, ary torolalana amin'ny antsipiriany sy fanohanana avy amin'ny orinasa. Sarany lehibe amin'ny vidiny.
Nividy an'io tamin'ny matt mainty aho mba hifanaraka amin'ny tototry ny granita maintiko. Toa tsara izany. Function & fijery mahazo kintana 5. Ny antony nomeko azy efatra fotsiny anefa dia rehefa mampiasa spray, dia mandeha isaky ny aiza ny rano… & na aiza na aiza no tiako holazaina. Ary rehefa afaka herinandro vitsivitsy nanafoanana ny rano, dia misy fantsona kely tsy misy fangarony kely miseho hatramin'ny farany.
J *** h2020 / 12 / 21
Ny fametrahana tsotra sy ny faucet dia toa kalitao tsara. Ny hany tokana ampianariko dia ny loha dia plastika fa tsy vy. Manantena aho fa haharitra mandritra ny fotoana maharitra. Fonosina tsara sy toy izany misy fiantohana 5 taona. Sarany ankapobeny amin'ny vidiny kely!
Tiako ny faucet vaovao! Miasa tsara hatreto. Raha manana mpantsaka matihanina mametraka azy io hahazoana antoka fa napetraka tsara. Manantena aho fa haharitra ela be izany. Hanova raha manomboka mitete na mihozongozona.
Tonga saika tafavory tanteraka. Kalitao tsara ny fifandraisana amin'ny rano, toa mandeha tsara ny faucet Ary tiako ilay kitapo kely amin'ny faritra (toy ny peratra vita amin'ny rubber na toy izany) niaraka taminy.
manavao ny hevitra nataoko teo aloha aho. Nanomboka nibontsina teo am-potony ny loko mainty taorian'ny 6 volana latsaka, fa ny orinasa kosa dia nanolo ilay faucet ho antoka. Tianay ny fiasa sy ny fomban'ny faucet.